Nhau - Benefits of Camping
Kambi ine nhamba huru yemabhenefiti kumunhu wese akura uye mudiki ayo iwe nemhuri yako munogona kunakidzwa nawo muchipedza nguva muri kunze kukuru:
1.Stress kuderedza:Siya kuronga kwakawandisa kumba.Paunenge uchidzika musasa, hapana nzvimbo yekuve pane imwe nguva, uye hapana chinokukanganisa kana kukwikwidza kuti utarise.Mhedzisiro yemusikirwo yerudzi urwu rwekumisikidza kudzikisira kushushikana uye kuzorora senge iwe usingawane kumwe kumwe.
2. Mhepo itsva:Iwe unogona kunge usiri kuziva kuti kushomeka kwemweya mutsva muhupenyu hwako hwezuva nezuva.Paunoenda kumusasa, unowana kunhuhwirira kunoshamisa kwekunze, pamwe nekunhuhwirira kwekudya kwemanheru kubika pamoto wakazaruka.
3.Kuvaka hukama:Imwe yeakanakisa uye yakakosha maficha ekudzika musasa ndeyekuti inokubatsira iwe kuvaka nekusimbisa hukama.Paunoenda kumusasa neshamwari kana mhuri, unowana mukana wekutaura uye kushanyira pasina kuvhiringika, kunyangwe pakati pehusiku.
4.Kusimba mumuviri:Nguva inopedzwa mumusasa inguva yenyama.Unodzika tende, unounganidza huni, unofamba-famba.Kumba, isu tinowanzo rarama hupenyu hwekugara husingakurudzire kusimba kwemuviri.Paunenge uchidzika musasa, haugone kubatsira asi kuita kurovedza muviri uye kukwidza kurova kwemwoyo wako.
5.Kushaikwa kwearamu wachi:Ndeipi nguva yawakanonoka kurara usina alarm yekumutsa?Paunenge uri mumusasa, wachi dzealaramu chete dzaunadzo izuva uye kurira kweshiri.Kumuka nemasikirwo kwete alarm wachi chiitiko icho munhu wese anofanira kugara achiwana.
6.Kubvisa:Kusasa musasa mukana wakanaka wekuti munhu wese asunungure uye aende kure nezvikirini zvake.Mukunze kwekunze, hauwane makomputa, mahwendefa kana terevhizheni uye pane zvimwe zvakawanda zvekuita izvo zvisingade zvemagetsi.
7.Chikafu chikuru:Chikafu chinongonaka zvirinani kana chagadzirwa kunze.Pane chimwe chinhu pamusoro pekubika zvokudya pamoto wemusasa, grill yemusasa kana mukicheni yeDeluxe Cabin iyo isingagoni kudzokororwa paunenge uchidya kumba.Uyezve, hapana chinorova zvakanyanya kugadzirwa pamusoro pemoto wakavhurika.Rota hombe uye ronga menyu yakanaka usati wabuda parwendo rwako rwekudzika musasa.
8.Kubatana nemasikirwo:Paunenge uchidzika musasa, unowana mukana wekusangana nezvisikwa, kusangana nemhuka dzesango uye kuona nyeredzi dziri kure nemwenje wakajeka weguta guru.Hapana chakafanana nazvo.Ita shuwa kuti iwe nemhuri yako mune mukana wekubatana nemasikirwo kana iwe uchiongorora akawanda mabhenefiti ekudzika musasa.
9.Kuvandudzwa kwehunyanzvi hutsva:Iwe haugone kubatsira asi kukudziridza hunyanzvi hutsva paunenge uchidzika musasa.Wese munhu ari parwendo achabatsira uye mukana wakanaka wekudzidza zvinhu zvitsva.Unogona kudzidza kugadzira matende, kusunga mapfundo, kutanga moto, kubika chikafu chitsva nezvimwe.Unyanzvi uhwu hwakakosha kuve nahwo, uye zvakadaro hatiwanzowana mukana wekuhukudziridza mukati memaitiro edu enguva dzose akabatikana.
10. Mikana yedzidzo:Kune vana, nguva inopedzerwa kumisasa inguva inopedzerwa kudzidza, chinova chimwe chezvikonzero nei zvirongwa zveku scouting zvakakosha.Ivo vanofambisa zviitiko zvekukambi zvinovakwa zvakatenderedza vana vachidzidza zvinhu zvitsva, zvinosanganisira kubata hove, kubika, kufamba netsoka, kusunga mapfundo, kutanga moto, kuchengetedza, rubatsiro rwekutanga uye zvimwe zvakawanda.
11.Kukura kwechivimbo:Zvakakosha kuti vana vawedzere kuzvimiririra zvishoma nezvishoma uye vane chivimbo mukugona kwavo.Imwe yemabhenefiti ekudzika musasa kwevechidiki ndeyekuti inovabvumidza kudzidza kuzvimiririra munzvimbo yakachengeteka uye inodzorwa.Vana vanova nechivimbo sezvavanodzidza zvinhu zvitsva uye kuva nezviitiko zvenguva yokutanga.
12.Kubatana kwemhuri:Kudzika musasa kunobatsira vana nemhuri dzavo nekuti kunogona kubatsira kusimbisa zvisungo pakati penhengo dzemhuri - vakoma nevanin'ina, vabereki nevana uye rondedzero inoenderera.Mese muchadzokera kumba muine simba zvikuru seboka.
Nguva yekutumira: Mar-23-2022